डुइङ विजनेश रिपोर्टमा अर्थमन्त्रीको अझै असहमति
विश्व बैंक भन्छ, नेपालको प्रगति उत्साहजनक
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्व बैंकले प्रकासित गरेको पछिल्लो वर्षको डुइङ विजनेश रिपोर्टमा अझै असहमति भएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको विश्व बैंकको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहिबार घुमाउरो पारामा असहमति राखेका हुन् । विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश रिर्पोटमा नेपालले १६ स्थान सुधार गर्दै ११० बाट ९४ स्थान हासिल गरेको छ । गत वर्षको रिर्पोटमा पूरै असहमति जनाएका खतिवडाले यस वर्र्षको रिर्पोटमा पनि व्यवासाय सहजीकरणमा नेपालले थलानी गरेको सुधारको प्रयासहरु पूरै रिर्पोटमा समावेस हुन नसकेको बताए । मन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालले धेरै कुरामा सुधार गरेको बताउँदै आगामी प्रतिवेदनमा यी विर्षयहरु पनि समावेस हुन सके नेपालको स्थान अझै सुधार विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांख्यिक र वातावरणीय अवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले हालैका वर्षहरुमा हासिल गरेको आर्थिक सामाजिक प्रगति बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा उनले वित्तीय क्षेत्र तथा उर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा विश्व बैंकको सहयोगले सघाउ पुगेको र यसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असरहरु देखिन थालेको पनि जानकारी दिए । यसबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका साथै आर्थिक वृद्धिका लागि पहिले देखिएका अबरोधहरु हट्दै गएको खतिवडाको दाबी थियो ।
छलफलको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट मेक्सिकोलगायतका देशहरुको कार्यकारी निर्देशक जर्ज जाभेज प्रेसाले छोटो समयमै संघीयता व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको उच्च प्रशंसा गरेका थिए । उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियाको बारेमा नजिकबाट बुझ्न विश्व बैंकमा रहेको कुल मताधिकारको करिब ५० प्रतिशत र करिब १०० देशहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिमण्ल नेपाल आएको बताए ।
स्थलगत भ्रमणको क्रममा नेपालले गरेको संघीयताको अभ्यास नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर पाएको र यसबाट व्यवहारिकरुपमा थप सिक्ने मौका मिलेको उनको दाबी थियो । छलफलकै क्रममा अन्य मुलुकका कार्यकारी निर्देशकहरुले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, कर प्रणाली, वाह्य क्षेत्रको जोखिम, नागरिकका उच्च अपेक्षाको व्यवस्थापन, निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रयास र नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको भूमिका बारे जिज्ञासा राखेका थिए । उनीहरुले नेपालले छोटो समयमै गरेको संघियता कार्यान्वयनबारे खुलेरै प्रशंशा गरेका थिए । अर्थमन्त्रीका अनुसार विश्व बैंकले तीनवटै तहका सरकारका जिम्मेवारी बाँडफाँड, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता विकास र सुशासनमा सहयोग गदैै आएको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्रीले संघियता कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालललाई थप स्रोत आवश्यक रहेको भन्दै विश्व बैंकका प्रतिनिधीसँग साययता बढाउन आग्रह समेत गरे ।